ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျဖို့ ပဈမှတျထား – the One Sports Journal
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျဖို့ ပဈမှတျထား
ယူရို-၂၀၂၀ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈတဲ့ နာမညျကွီးဘယျလျဂြီယံနဲ့ လကျရှိခနျြပီယံပျေါတူဂီအသငျးတို့ဟာ ဒီနညေ့(မွနျမာစံတျောခြိနျ တနင်ျလာမနကျ ၁:၃၀)မှာယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီဘရိုငျးနား၊ လူကာကူ၊ ဟာဇကျတို့လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှပေါဝငျနတေဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျးဟာ ယူရို-၂၀၂၀ပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ရပေနျးစားနတေဲ့အသငျးတဈသငျးဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျဖို့ ပဈမှတျထားနတောပါ။
အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့ ထိပျတနျးအဆငျ့ခွစှေမျးပွသနဆေဲဖွဈသူ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရို-၂၀၂၀ပွိုငျပှဲမှာ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ အမြားကွီးရယူထားနိုငျပွီး ယူရိုပွိုငျပှဲအကွိမျအမြားဆုံးကစားသူ၊ ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား၊ ဥရောပကစားသမားတှထေဲမှာ ယူရို+ကမ်ဘာ့ဖလားနှဈခုပေါငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားစတဲ့စံခြိနျတှအေပွငျ အီရနျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးအလီဒါယီတငျရှိထားတဲ့ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျကိုလညျး အမီလိုကျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ အခု ဘယျလျဂြီယံနဲ့ကစားမယျ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ စုစုပေါငျးသှငျးဂိုး(၁၁၀)နဲ့ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ စံခြိနျတငျနိုငျမှာပါ။
နှဈသငျးစလုံးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှပေါဝငျနတောကွောငျ့ ကှာတားဖိုငျနယျတကျခှငျ့ကို ဘယျအသငျးရယူနိုငျမလဲဆိုတာ ခကျမှနျးရခကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အစဉျအလာမှတျတမျးတှအေရတော့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို အသာရနတောတှရေ့မှာပါ။ ပျေါတူဂီနဲ့ဘယျလျဂြီယံအသငျးတို့ဟာ အဓိကနိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးတဈခုမှာ တဈခါမှဆုံတှဖေူ့းတာမြိုးမရှိဘဲ အခုမှ ပထမဆုံးအကွိမျ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ထိပျတိုကျတှနေ့တောဖွဈပါတယျ။
ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ အားသာနတောက ၁၉၉၀ တုနျးက ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲအဖွဈ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အဝေးကှငျးပှဲမှာ (၃)ဂိုးပွတျနဲ့ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ၂၁ ရာစုအတှငျး တဈခါမှမရှုံးသေးတာပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး(၃၀)ကြျောကာလအတှငျး ဒီနှဈသငျး စုစုပေါငျး(၅)ကွိမျဆုံတှခေဲ့တာမှာ ပျေါတူဂီက (၃)ကွိမျနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရကေခြဲ့ပွီး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ နောကျဆုံးအကွိမျဆုံတှခေဲ့တဲ့ ခွစေမျးပှဲတုနျးက ဂိုးမရှိသရနေဲ့ပွီးဆုံးခဲ့ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ အခု (၆)ကွိမျမွောကျဆုံတှမေ့ယျ့ပှဲမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးက ပျေါတူဂီကို ၂၁ ရာစုအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျနိုငျပှဲရယူနိုငျမလား၊ ပျေါတူဂီအသငျးကပဲ မှတျတမျးကောငျးကို ဆကျထိနျးပွီး ကှာတားဖိုငျနယျတကျခှငျ့ရယူနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထား
ယူရို-၂၀၂၀ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီးဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံပေါ်တူဂီအသင်းတို့ဟာ ဒီနေ့ည(မြန်မာစံတော်ချိန် တနင်္လာမနက် ၁:၃၀)မှာယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းနား၊ လူကာကူ၊ ဟာဇက်တို့လို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေပါဝင်နေတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာ ယူရို-၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။
အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းပြသနေဆဲဖြစ်သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရို-၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲမှာ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ အများကြီးရယူထားနိုင်ပြီး ယူရိုပြိုင်ပွဲအကြိမ်အများဆုံးကစားသူ၊ ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား၊ ဥရောပကစားသမားတွေထဲမှာ ယူရို+ကမ္ဘာ့ဖလားနှစ်ခုပေါင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားစတဲ့စံချိန်တွေအပြင် အီရန်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးအလီဒါယီတင်ရှိထားတဲ့ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကိုလည်း အမီလိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အခု ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်းသွင်းဂိုး(၁၁၀)နဲ့ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်မှာပါ။
နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေပါဝင်နေတာကြောင့် ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ခွင့်ကို ဘယ်အသင်းရယူနိုင်မလဲဆိုတာ ခက်မှန်းရခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစဉ်အလာမှတ်တမ်းတွေအရတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို အသာရနေတာတွေ့ရမှာပါ။ ပေါ်တူဂီနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းတို့ဟာ အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ တစ်ခါမှဆုံတွေ့ဖူးတာမျိုးမရှိဘဲ အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် အားသာနေတာက ၁၉၉၀ တုန်းက ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအဖြစ် ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အဝေးကွင်းပွဲမှာ (၃)ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၁ ရာစုအတွင်း တစ်ခါမှမရှုံးသေးတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော်ကာလအတွင်း ဒီနှစ်သင်း စုစုပေါင်း(၅)ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တာမှာ ပေါ်တူဂီက (၃)ကြိမ်နိုင်၊ (၂)ပွဲသရေကျခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲတုန်းက ဂိုးမရှိသရေနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အခု (၆)ကြိမ်မြောက်ဆုံတွေ့မယ့်ပွဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက ပေါ်တူဂီကို ၂၁ ရာစုအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ပွဲရယူနိုင်မလား၊ ပေါ်တူဂီအသင်းကပဲ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ခွင့်ရယူနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
ကှာတားမှာ ဘယျပွိုငျဘကျအသငျးကိုမဆို ရငျဆိုငျရတာ လှယျကူမယျလို့ မနျစီနီဆို